पर्यटकहरुका लागि डोमिनिकन गणतन्त्र - खुशी को एक देश स्वर्ग। यो हाम्रो ग्रह, वर्ष-राउन्ड न्यानो घाम र यसको न्यानो समुद्र खुसी जहाँ एक विदेशी कुनामा स्थित छ। विविध बिदा र धेरै यात्राहरु बनाउन। धेरै मान्छे को सपना - क्यारेबियन सागर स्थित यी ट्रपिकल द्वीप आफ्नो बिदा खर्च गर्न। खैर, तपाईं अझै पनि वास्तविकता यसलाई अनुवाद गर्न व्यवस्थित भने, त्यहाँ मित्र र परिवारका एक उपहार रूपमा डोमिनिकन गणतन्त्र देखि ल्याइएको हो के पत्ता लगाउन आवश्यक छ? आखिर, पक्कै, स्मृति चिन्ह देश नै, आफ्नो परम्परा र संस्कृति को सार प्रतिबिम्बित गर्न चाहन्छु।
डोमिनिकन गणतन्त्र सिगार को निर्माण मा undisputed नेता छ। धेरै मानिसहरू गुणस्तर लोकप्रिय क्युबा ब्रान्ड मा टाढा उच्च हो भन्ने विश्वास गर्छन्।
डोमिनिकन सिगार हात द्वारा रोल्ड छन्। आफ्नो उत्पादन मा सुर्ती तीन प्रजातिहरू प्रयोग गर्दछ। प्रकाश र थोरै सिगार लागि olor dominicano आवश्यक छ। यो एक स्थानीय सुर्ती छ। बलियो र अति सुगन्धित सिगार क्युबा piloto cubano प्राप्त। निर्मित सुर्ती उत्पादन र piloto cubano एक विभिन्नता छ सान Vicente, को किसिमहरु।
कवर पानामा सन्दर्भमा, यो डोमिनिकन इक्वेडर, निकारागुआ, मेक्सिको, हन्डुरास र इन्डोनेशिया बाट आयात। यो पनि स्थानीय कच्चा माल प्रयोग क्युबा सिगार तिनीहरूलाई distinguishes।
Davidoff को, जुआन क्लेमेन्ट, Avo, Knockando, कार्लोस स्रोत लोकप्रिय ब्रान्ड। चुरोट को उत्तरार्द्ध फारममा क्यामरून देखि विदेशी सुर्ती प्रयोग गर्नुहोस्।
त्यहाँ connoisseurs का लागि डोमिनिकन विशेष विकल्प निर्माताहरु छन्। 1986 देखि, खरीददारों एक असामान्य सेट प्रस्ताव छन्। उहाँले Courvoisier भनिन्छ। यसको फरक प्याकेजिङ्ग अघि सिगार को ब्रांडीको व्यारेल बाहिर डेढ वर्षसम्म राखिनेछ भन्ने तथ्यलाई मा निहित। त्यसपछि तिनीहरूले ग्लास कन्टेनर मा पैक र सुन्दर उपहार बक्स मा पैक छन्।
त्यस अवस्थामा, तपाईं डोमिनिकन गणतन्त्र भ्रमण गर्ने निर्णय भने, यो आवश्यक यसलाई सुर्ती वृक्षारोपण भ्रमण गर्न सम्भव छ, जसको समयमा एक यात्रा, मा जाने छ। तिनीहरूलाई अर्को कारखाना, साथै समाप्त उत्पादनहरु पसलहरूमा छन्। पहिले खरीद सिगार स्वाद सकिन्छ, र केवल त्यसपछि चयन गर्नुहोस् र खरिद।
तपाईं डोमिनिकन गणतन्त्र के ल्याउन थाहा छैन भने, त्यसपछि रम ध्यान। यो प्रसिद्ध समुद्री डाकू पेय स्थानीय धेरै लोकप्रिय उठाइरहेका छन्। यो क्यारेबियन देशहरुमा कि रम विश्वास छ डोमिनिकन गणतन्त्र सहित अफ्रिकी प्रवासिहरु धन्यवाद देखियो। तिनीहरूले ल्याए उखु। यो संस्कृति को मीठो र बाक्लो रस, सूर्य लामो स्थितिमा भने, किण्व | | खमीर गर्न थाले। त्यस अवस्थामा परिणाम उत्पादन पानी एउटा सानो रकम invigorating र स्वादिष्ट पेय प्राप्त गर्न सकिन्छ थपिएको थियो। को सोह्रौं र सत्रौँ शताब्दीपछि मा, रम को एंटिलीज को देशहरूमा एउटा महत्त्वपूर्ण निर्यात घटक थियो।
को आरडी यो पेय को उत्पादन देर उन्नाइसौँ शताब्दीमा प्रदर्शन गरिएको छ। आफ्नो शोधन प्रक्रिया र टेस्टिङ रम स्पेनिश जरा तीन Dominicans सिर्जना गरियो। आफ्नो पेय, परम्परागत संग तुलना थप नरम र मीठो थियो।
डोमिनिकन रम रंग र स्वाद मा फरक छ। यी विशेषताहरु को पेय अर्क सिधै निर्भर छन्। बोतल यो फ्याँकिएको छ जसमा, उपयुक्त लेबल छ। डोमिनिकन गणतन्त्र देखि रम एक मिठाई नम्र स्वाद हुन सक्छ र चार वर्ष एक वर्ष द्वारा ढिलाइ हुन। एक पेय संग बोतल मा उज्ज्वल लेबल टाँसिएको गरिनेछ। रम तरकारी additives संग गरे। को बोतल मा गाढा लेबल छन्। त्यस अवस्थामा आरडी लोकप्रिय पेय गाढा गर्न हल्का पहेंलो देखि एक रंग हुन सक्छ। रोम टोन यसको जोखिम को अवधि र बोट पूरक को प्रकारको निर्भर हुनेछ। सबै भन्दा लोकप्रिय ब्रान्ड - Bermudez, Barceló र Brugal।
यसलाई स्थानीय द्वारा यसको शुद्ध रूप मा कि समुद्री डाकू उमालेर बनाउनु प्रयोग गरिएको छैन भने गर्नुपर्छ। यो ककटेल को एक किसिम को तैयार मा समावेश गरिएको छ।
कि डोमिनिकन अझै पनि गणतन्त्र बाट आयात गर्दै हुनुहुन्छ? तपाईं यो विदेशी देश भ्रमण गर्नुभएको छ भने, त्यसपछि "मामा Juana" पिउन ध्यान। यसको सदस्य रम समावेश र विशेष जडीबुटी र मह सङ्कलन। यसबाहेक, पेय रक्सी को उत्पादन प्रयोग गरिएको। स्थानीय "मामा Juana" सर्दी को एक उत्कृष्ट माध्यम रूपमा प्रयोग गरिन्छ।
तपाईँको मित्र र परिवारका एक उपहार रूपमा डोमिनिकन गणतन्त्र बाट आयात गर्दै हुनुहुन्छ? को पाठ्यक्रम, कफी। यो देशमा आफ्नो लगभग तीन सय वर्ष उब्जाउ गरिन्छ। यस मामला मा, डोमिनिकन कफी अत्यधिक विश्वव्यापी मूल्यवान छ। यसलाई पश्चिमी युरोप, अमेरिका र जापान को सबै भन्दा प्रसिद्ध निर्माताहरु द्वारा प्रयोग गरिएको छ। तिनीहरूले डोमिनिकन गणतन्त्र हुर्किसकेका कफी सिमी को मिश्रणों को थपिएका छन्। यो निकै उत्पादन को स्वाद सुधार गर्न सक्नुहुन्छ।
डोमिनिकन गणतन्त्र अरेबिक उब्जाउ गरिन्छ। यो उच्चतम छ कफी को ग्रेड। यो जटिल तीव्र सुगन्ध, मह, चकलेट, फलफूल र फूल को संयोजन को reminiscent द्वारा विशेषता छ। यस मामला मा, डोमिनिकन कफी धेरै बलियो छ। यसलाई सधैं एउटा सानो कप मा चीनी संग सेवा छ।
डोमिनिकन गणतन्त्र कफी - राष्ट्रिय घमण्ड स्रोत हो। यो लगभग सबै पिएको छ। यो पेय को तिरस्कार अभद्र रूपमा मानिन्छ। यो देशमा सबै भन्दा राम्रो ब्रान्ड स्यान्टोडोमिङ्गो छ।
एक व्यवहार रूपमा डोमिनिकन गणतन्त्र बाट आयात गर्दै हुनुहुन्छ? जवाफ सरल छ। कोको। यो देश को मुख्य कृषि उत्पादनहरु मध्ये एक छ। डोमिनिकन गणतन्त्र देखि कोका ल्याए, तपाईं रासायनिक मल र कीटनाशक बिना हुर्केका छ कि एक प्राकृतिक उत्पादन को आश्वासन गरिनेछ। कोको स्वयं प्रक्रिया। उत्पादन को गुणवत्ता डोमिनिकन गणतन्त्र संसारको शीर्ष दस निर्यातकहरु प्रविष्ट गर्न अनुमति दिन्छ।
बैग बिक्रि छ जो कोका, को रक्सी खींचना भने, पेय तपाईं यो विदेशी देश मा वास्तविक खुशी ल्याउनेछ। यो उत्पादन हाम्रो देशमा बेचिन्छ धेरै उच्च गुणवत्ता व्यक्तिहरूलाई छ।
डोमिनिकन गणतन्त्र के ल्याउन? पनि सबैभन्दा मांग उम्दा पेय कोको मोती देखि बनेको छ जो पूरा स्वाद। यो उत्पादन बैंक को पारदर्शिता मा एक विदेशी देश मा बेचिएको छ। कोको पेय, बल, पोसिलो चिल्लो लागेको र स्वादिष्ट देखि गरे।
यो उत्पादन दोस्रो dampening शक्ति छ। आफ्नो मात्र अभोकाडो तेल बचाउनुभयो। स्थानीय नरिवल तेल बल्न लागि प्रयोग गरिन्छ। यो कपाल मा rubbed छ। राम्रो नरिवल तेल छाला nourishes। यो चिस्यान हानि रोक्छ कि उनको पातलो plenochku सिर्जना गर्छ। साथै, नरिवल सुगन्ध एक शान्त प्रभाव छ।
खरीद गर्दा तेल स्पष्ट र बेरंग हुनुपर्छ भनेर सजग हुन। तपाईं एक पहेलो उत्पादन प्रस्ताव गर्दै हुनुहुन्छ भने, तपाईंलाई थाहा हुनुपर्छ: यो अशुद्धताओं छ। नियम, enterprising व्यापारीहरु आफ्नो पाम वा सूर्यमुखी तेल पतला।
तपाईं डोमिनिकन गणतन्त्र आफ्नो प्रियजनलाई एउटा उपहार रूपमा ल्याउन भनेर भनिने Fairyland मा प्राप्त गर्न हुन भने? धेरै पर्यटकहरु आभूषण अम्बर बनाइएका विभिन्न किन्न खुसी छन्। बहुमूल्य पत्थर नीलो देखि डोमिनिकन प्रसिद्ध आभूषण। यो Larimar भनिन्छ।
यो देशबाट एम्बर संसारको सबै भन्दा राम्रो हुन मानिन्छ। यसलाई मालिक राम्रो भाग्य ल्याउन, स्थानीय बासिन्दा अनुसार, विभिन्न रंग आउँछ र। यो पत्थर आभूषण को मूल्य चार छ गर्न सय डलर देखि दायरा।
अर्द्ध-अनमोल Larimar डोमिनिकन गणतन्त्र मात्र पाउन सकिन्छ। यो पत्थर चाँदी र सुन फ्रेम छ। किनभने यो कंगन, आकर्षण, छल्ले, हार र जस्तै बनेको छ। डी
त्यहाँ आरडी मा पर्यटकहरु प्रस्ताव गरिएका उत्पादनहरु को एक ठूलो संख्या हो। .. लीमा - यो मोती र amulets शार्क दाँत, चित्रहरू, गोले, गलैँचा, हात बुना बनेको गहने, आदि बाट प्राय अनुहारहरू बिना यो देश विचित्र माटोको गुडिया बाट आयात। तिनीहरूले परम्परागत पोशाक मा लुगा र जीवनको विशिष्ट स्थानीय तरिका प्रदर्शन गर्दै हुनुहुन्छ। डोमिनिकन गणतन्त्र देखि स्मृति चिन्ह आफ्नो परिवार र साथीहरू कदर हुनेछ।
उपहार किन्न सबै भन्दा राम्रो ठाउँ कहाँ छ?
होटल को क्षेत्र मा गर्दै लायक छैन। त्यहाँ, सबै उत्पादनहरु धेरै उच्च मूल्य छ। कफी र कोका र नरिवल तेल भ्रमण किन्न राम्रो छ। सिगार सुर्ती कारखानों मा खरिद गर्न सकिन्छ। तपाईं पनि पक्कै भ्रमण मा प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ हुनेछ। यस स्मृति चिन्ह बाँकी डोमिनिकन बजार प्राप्त गर्न सिफारिस गरिएको छ। त्यहाँ सस्ता छन्।
आकर्षण र होटल Vytegra
को जाडो लागि टमाटर पेस्ट lecho (फोटो) रिसेपी
घर बोर्डिङ "कक्षा-1" (सोची, एडलर): विवरण, समीक्षा
मोटरसाइकल KTM ड्यूक-125: विनिर्देशों, समीक्षा र फोटो
यूराल Diocese: इतिहास र वर्तमान स्थिति
यस चित्रकला "पेरिस" र अन्य कामहरू Konstantin Korovin द्वारा